トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Handresy Ahoana no Hanemono-Dejihane (fototra hevitra)
Tantaran'ny pachinko, satria ny milina Fito dia lasa foto-kevitra, heveriko fa miditra ao na dia ireo izay tsy mahafantatra izany dia hoy izy tamin'i Hanemono. Ary ny sasany izay mahalala, Hanemono dia ho kely payout, dia mety ho ny olona sasany izay mihevitra fa tsy afaka handresy.
Na izany aza, raha fantatrao ny anjara mba hahafantarana mba handresy Hanemono koa, ianao mbola afaka handresy mivoaka.
Voalohany indrindra, ary avy eo dia ny famaritana ny Hanemono. Ny Hanemono, rehefa miditra ny baolina iray nitifitra ny toerana voafaritra iray, dia hanokatra ny elatry ny mpandray anjara zavatra manoloana ny birao foibe. Ny sasany amin'ireo toetra zavatra, telo-lavaka misokatra, ho tonga lehibe hira Manamarina ny baolina, raha miditra eo afovoan'ny azy ho Hanemono.
vao haingana, fa Hanemono izay tsy hita intsony mora foana, na misy zavatra, raha tahaka ny ahoana ny fandresena, te-hahita aho. Hanemono no zavatra mety hisy vokany eo amin'ny fantsika nanitsy ny mihoatra ny fito milina. Raha Mino aho fa ny fandresena ao
Hanemono, dia ilaina ny mijery ny fantsika fanitsiana. Indray mandeha aho nandeha tany kosa: Raha ianao fanovana ny fihantonan-javatra, mety mba handresy mihoatra ny fito milina no azo lazaina fa ambony kokoa. Ankehitriny, dia hampahafantatra ny toerana misy ny fantsika fanitsiana tianao ho hita mba handresy.
Voalohany indrindra, dia ny fantsika fanitsiana eo amin'ny manodidina ny manan-danja indrindra fanombohan'ny chucker. Near ny fanombohan'ny ,: roa tonta dia, ireo izay misokatra dia mazava ho azy mahasoa. Izany no voajanahary ao amin'ny tantara ny tsara fihantonana eo amin'ny et? amin'ny manodidina ny fanombohan'ny chucker misokatra, fa ny hafa iray, fa toy ny zava-dehibe toy ny akaikin'ny voalohany, dia ny fantsika fanitsiana ny ampahany antsoina hoe hakama tao an-tampon-fanombohan'ny fantsika.
fantsika izany, dia niandrandra, satria dia banga eo amin'ny fanombohan'ny chucker, dia ho mora kokoa ny ahitana ny baolina. Raha toa ianao ny fihantonan-javatra fanitsiana ny faritra antsoina hoe hakama, dia ny hoe na dia kely manomboka tightened be, mety hiditra voalohany. Mino aho fa tsy ny
payout ny tendany, mba ho ny olona sasany mba nisoroka, fa raha oharina amin'ny Fito milina, mahatonga azy ho mora ny namely tsara kokoa ny Hanemono. latsaky ny fampiasam-bola Ao an-drenivohitra, hilalao tonga dia mandefa radio izy, satria ny mizana marin-toerana dia mora, tsikelikely payout mihoatra noho ny mino dia handeha mitombo.
fisamborana na ny fanaka fantsika fanitsiana, indray mandeha mipetraka eny an tsara fantsika fanitsiana latabatra, izany fotsiny rehefa mamely. Raha apetraka ao amin'ny fanombohana, raha nataony tao amin'ny hira hanokatra ny elany, satria ny baolina avy dia afaka handresy izy, ary fito milina no mifehy ny zava-drehetra ao amin'ny fandaharana, Mino aho fa mahafinaritra sy mety hanandrana hafa.
indray mandeha, dia be dia be aho payout dia tsy azo nampoizina, raha mbola ny lalao indray andro, Mino aho fa handresy moramora ela. Fiainan'ny Hanemono dia fantsika fanitsiana. Raha mahatsiaro izany ihany, ny fotoana dia kely, dia milaza fa handresy mora foana ny modely raha oharina Fito milina.
vao haingana, mba tsy mahita be loatra, dia toy izany ny tany manodidina azy pachinko parlors izay nanorina be dia be, toy ny latabatra nampiasaina. Na dia ireo izay hohalavirina, ny hevitra mba handresy, satria fantsika fanitsiana ihany, miezaka milalao indray mandeha amin'ny zavatra rehetra.